Ukubuya kwesibini kukaYesu Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ukuza kwesibini kukaYesu kuya kuba njani. Enye yezona zinto zingaziwayo kuzo zonke iindawo zobuKristu Ukuza kwesibini kukaYesu. Kubantu abaninzi, le nyaniso isondele kakhulu. Kwabanye, kusekude kude. Nangona kunjalo, akukho mntu unayo impendulo yombuzo. Ekuphela kwento umKristu wokholo anokuyenza kukwazi kuza njani okwesibini kwaye kulungiselelwe kakuhle kwesona siganeko sibalulekileyo embalini.
Ngesi sizathu, ukusukela Fumanisa kwi-intanethi, besifuna ukuphendula eyona mibuzo ibalulekileyo ebuzwa ngumkristu ngamnye ngalo mzuzu. Ngenxa yoku siya kuzinceda ngeziqendu zebhayibhile ezibalisa le nyaniso kunye nenkcazo ehambelana nayo.
1 Kuza kuba njani ukuza kwesibini kukaYesu
1.1 Iivesi zeBhayibhile ezibalisa ngokuza okwesibini
2 Ukuza kwesibini kukaYesu kuya kuba nini?
Ukuza kwesibini kukaYesu kuyakwenzeka ekupheleni kwexesha. Ngaphandle koko, yonke into el mundo uzakuyibona. Iya kuba ngumhla womgwebo ezizweni zonke. Kodwa kwabasindisiweyo, ukubuya kukaYesu kuya kuba ngumthombo wovuyo, kuba kuya koyisa uMtyholi kwaye kubakhokelele ukuba baphile naye ngonaphakade.
Ekuzeni kwesibini kukaYesu, wonke umhlaba uya kumbona uKristu esihla ezulwini kunye neengelosi. Siza kuva ixilongo kwaye abafileyo baya kuvuka. Kwelinye icala, abaphilayo baya kuthathwa. Wonke umntu uya kuguqa phantsi anqule uYesu. Ihlabathi lanamhlanje liya kutshatyalaliswa, uBukumkani bukaThixo buya kusekwa, kwaye amakholwa aya kuhlala ngonaphakade noYesu.
Iivesi zeBhayibhile ezibalisa ngokuza okwesibini
Uya kubonakala ngelo xesha umqondiso woNyana woMntu ezulwini; zaye ziya kumbambazelela zonke iintlanga zomhlaba, zimbone uNyana woMntu esiza phezu kwamafu ezulu, enamandla, nobuqaqawuli obukhulu. Kwaye uya kuthuma iingelosi zakhe ngesandi esikhulu sexilongo, kwaye baya kuhlanganisa ndawonye abanyulwa bakhe bevela emimoyeni yomine, ukusuka kwesinye isiphelo sezulu ukuya kwesinye.
UMateyu 24: 30-31
Kuba xa umyalelo unikiwe, ngelizwi lengelosi enkulu kunye nesandi sexilongo likaThixo, iNkosi ngokwayo iya kuhla ivela ezulwini, kwaye abafele kuKrestu baya kuvuka kuqala. 17 sandule thina babudlayo ubomi, sixwilelwe emafini kunye nabo, siye kuyikhawulela iNkosi esibhakabhakeni; Kwaye ke siya kuhlala neNkosi ngonaphakade. 1
KwabaseTesalonika 4: 16-17
«Kwaye kuni nina bakhathazekileyo, phumlani nathi, xa iNkosi uYesu ibonakala ezulwini kunye neengelosi zamandla ayo,
edangatyeni lomlilo, ukuziphindezela kwabo bangamaziyo uThixo, nabangazilulameliyo iindaba ezilungileyo zeNkosi yethu uYesu Kristu;
abo baya kuva ukubethwa, intshabalalo engunaphakade ikhutshiwe, ingabikho ebusweni beNkosi, nasebuqaqawulini bokomelela kwayo;
xa isiza ngaloo mhla isizukiswe kubangcwele bayo, imangaliswe kubo bonke abakholwayo (ngokuba ubungqina bethu bukholwanga phakathi kwenu) ». 2
KwabaseTesalonika 1: 7-10
«Ukulinda nokungxamela ukufika kwemini kaThixo, apho amazulu, evuthayo aya kulungiswa, neziqalelo, xa zitshisiwe, zinyibilike!
13 Siyathemba ke, ngokwesithembiso sakhe, izulu elitsha, nomhlaba omtsha, ahlala kuwo Ubulungisa. "
Eyesi-2 kaPetros 3: 12-13
Ukuza kwesibini kukaYesu kuya kuba nini?
Akukho mntu wazi umhla apho uYesu abuya khona. Akunakwenzeka ukuqikelela ukuba uya kuba nini lo mhla kuba uya kwenzeka xa singalindanga. Ukuba umntu uthi uyazi ukuba kuyakwenzeka nini, uyaphazama. Ukuba umntu uthi uYesu sele ebuyile, akufuneki sikholwe kuba xa isenzeka wonke umntu uya kwazi.
Ngokuphathelele umhla nelixa, akukho namnye owaziyo, zingelosi zasezulwini, hayi uNyana, kodwa nguBawo kuphela.
Ukulandelelana kweziganeko ekufikeni kwesibini kukaYesu akucaci eBhayibhileni. Into ebaluleke kakhulu kukuba uYesu uya kubuya ngenye imini kwaye kufuneka sizilungiselele, kuba inokwenzeka nanini na. Eyona ndlela yokulungiselela ukuza kwesibini kukaYesu kukuguquka ezonweni zakho kwaye uphilele uThixo.
Ukuza kukaYesu sisizathu sovuyo kunye nethemba kulowo ukholwayo. Asimele soyike into ezakwenzeka. Kwabo bamgatyayo uYesu, iya kuba ngumhla wokugwetywa ngenxa yezono. Kodwa kuthi, oko kuthetha ukuba siya kuba noThixo ngonaphakade, kuBukumkani bobulungisa, uxolo novuyo.
Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde ukubuya kwesibini kukaYesu kuya kuba njani. Ukuba ngoku ufuna ukwazi kutheni kubalulekile ukuya ecaweni kwaye ithini ibhayibhile ngesi sihloko, qhubeka ubrawuza Fumanisa kwi-intanethi.